Fanakorontanana ataon’ny TIM : Ho samborina i Ravalomanana -
AccueilRaharaham-pirenenaFanakorontanana ataon’ny TIM : Ho samborina i Ravalomanana
Araka ny voalazan’ny lalàna 84-056 ny volana febroary 1984 mifehy ny fananganana sy ny firafitry ny OMC ‘’Organe Mixte de conception , dia nivory maika izy ireo androany manoloana ny mety ho fanakorontanana izay hitranga ny asabotsy ho avy izao. Ny OMC moa dia fikambanan’ireo izay misehatra ny fikirakirana ny fitandroana ny filaminana amina Tanana iray, zany hoe ity androany ity dia ho an’ny Tanana Antananarivo. Mpikambana ao amin’ny OMC kosa araka izany hoe fitandroana ny filaminana izay dia hahitana mpitsara ao ny polisy , zandary, miaramila ary ny prefet. Ity fivoriana androany ity dia ny fanamafiana ny fanapahana ny efa nolazan’ny prefen’ny polisy Antananarivo afak’omaly amin’ ny fanafohanana ny hetsika izay kasain’ny antoko TIM ho tanterahina ny asabotsy ho avy izao. Noho izany dia tsy tokony hisy intsony ny kiry izay tokony ho ataon’ny antoko , satria dia efa mazava fa tsy azo tanterahina io hetsika io hoy ny prefen’ny polisy Antananarivo. Tsy ny an’ny TIM irery ihany anefa fa ny hetsika izay kasain’ny MLE ho tanterahina ihany koa , izay sady tsy nahazo alalana no tsy nangataka ihany koa
Niray zotra tamin’ity fivoriana nataon’ny OMC ity ihany koa ny fivorian’ireo tompon’andraikitry ny mpitandron’ny filaminana rehetra nahitana ministry ny foloalindahy, ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarmaria, ary ny ministry ny filaminana anatiny. Tapaka nandritra io fivoriana niarahan’ny tompon’andraikitry misahana ny filaminana ireo fa ho henjana ny fitondra ny filaminana eny mahamasina ny asabotsy izao. Ho feno mpitandro filaminana ihany koa ao anatiny sy ivelan’ny Mahamasina amin’ io fotoana, dia andray andraikitra avy hatrany ary tsy hitsitsy n’iza n’iza tratra amin’ izany . hentitra noho izany ny fandraisana fepetra ny andron’ny asabotsy ho avy izao, ary fandikan-dalana ihany koa ny finiavana hanatanteraka io hetsika io .Noho izany tahaka ny tsy fanarahan-dalàna rehetra dia ho samborina avy hatrany ny mpitarika raha toa ka mbola mitaona ny olony ho eny an-toerana ihany amin’io fotoana io. Tsihahivina ohatra ny efa nahazo an’i Alain Ramaroson izay efa nosakanana tsy hanatanteraka hetsika tetsy atohomadinika, nefa mbola nikiry ihany dia voatery nisambotra ny mpitandron’ny filaminana. Tahaka izany ihany koa ny hetsika teo amin’ny esplanade analakely izay efa nosakanana nefa mbola tonga teny an-toerana ihany i Guy maxime dia voatery nisambotra ihany koa ny mpitandron’ny filaminana. Noho izany raha io kirin’antitra ataon’dravalomanana io, dia azo hinohana fa hisy ny fisamborana ity farany eny Mahamasina
Nilaza hampakatra saran-dalana 500 Ariary ihany ireo kaoperativa mivondrona ao amin’ny Uctu ny voalohany volana septambra izao. Ny filoha lefitr’ity vondrona ity ny alatsinainy teo nilaza fa ny 6 amin’ireo 54 mpikambana ihany no hampakatra ...Tohiny